छोरा र छोरीका लागि अलग-अलग खेलौना किन ? | साहित्यपोस्ट
यदि लैङ्गिक हिसाबले तटस्थ खेलौना बनाउने हो भने त्यसले बच्चामा भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक र संज्ञात्मक विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । उनका अनुसार खेलौनाको कुनै रङ हुँदैन, न लिङ्ग नै ।
बि बि सी	 प्रकाशित १ मंसिर २०७८ १२:१६
पछिल्लो समय नेपाली समाजमा लैङ्किक समानताका मुद्धाहरू सतह र बहसमा आउन थालेका छन् । जसका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा अभियानसमेत चलाउने गरेकाे पाइन्छ । यसै विषय बिबिसिले लैङ्गिक विभेदसँग सम्बन्धित सामग्री केटा र केटीका लागि बनाइने अलग अलग खेलाैनालाइ लिएर तयार गरेकाे छ, जुन यहाँ प्रस्तुत गरिएकाे छ ।
रितु केही दिनमा आमा बन्नेवाला छिन् । भारत हरियाणमा बस्ने रितु आफ्ना बच्चाको हरेक इच्छा पूर्ति गर्न चाहन्छिन् । र, उनले हुनेवाला बच्चाका लागि एउटा कोठामा खेलौना र आवश्यक सबै सरसामन जुटाइसकेकी छिन् । छोरी भएमा गुलाबी रङको जम्पर सूट र गुडिया अनि छोरा भएमा निलो रङको जम्पर सूट र टेडी बियर ।
किन छोरीलाई गुलाबी रङको खेलौना र छोरालाई निलो रङको ? यो प्रश्नमा उनी भन्छिन्, ‘किनभने छोरीलाई गुलाबी रङ मनपर्छ । हामीले पनि त सानोमा गुडिया खेल्यौँ । तर, छोराले यस्तो रङ र खेलौना मन पराउँदैनन् ।’
गुगलमा छोरी वा छोराको खेलौना सर्च गर्ने हो भने त्यसमा स्पष्ट रूपमा विविधता देख्न सकिन्छ । गुगलमा छोरीको खेलौनामा मेकअप सेट, किचेन सेट, गुडिया आदि देखिन्छ जो अक्सर गुलाबी रङ हुन्छ । त्यसैगरी छोराको खेलौनामा थरीथरीका गाडी, बिल्डिङ ब्लक र रोबट देखिन्छ । तर, तपाईँले सोच्नुभएको छ – यस किसिमले छोरा र छोरीको लागि फरक फरक खालको खेलौना कसले तय गरिदिएका हुन् ? कसले छोरीलाई गुलाबी र छोरालाई निलो रङ रोजिदिएका हुन् ? यस प्रश्नमाथि अगाडि चर्चा गरिनेछ तर त्यसअघि हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ कि हामीले किन यस विषयमा चर्चा गरिरहेका छौँ ?
खासगरी डेनमार्कको खेलौना बनाउने कम्पनी ‘लेगो’ले घोषणा गरेको छ कि उसले आफ्नो उत्पादन र मार्केटिङबाट लैङ्गिक असमानता वा जेन्डर स्टीरियोटाइप हटाउनेछ । लेगो कम्पनीले यो निर्णय एक सोध पनि गरेको हो । लेगोको प्रमूख बजार प्रबन्धक जुलिया गोल्डिनले भनेकी छिन्, ‘रचनात्मक खेलले बच्चामा आत्मविश्वास, रचनात्मकता र सञ्चार कौशल बढाउनमा सहयोग गर्छ । तर, हामीले अहिले पनि अनुभव गर्न सक्छौँ कि पुरातन रूपमै चलिआएको स्टीरियोटाइप गतिविधिमा छाप लगाइएको छ कि यो एक विशेष लिङ्गको लागि सही छ । तर, लेगो समूहमा हामी जान्दछौँ कि यसलाई सही गर्न हाम्रो भूमिका हुनुपर्छ ।’
लेगोले एक शोध गर्ने संस्था जीना डेभिस इन्स्टिच्युट अन जेन्डर इन मिडियासँग मिलेर शोध गरेको थियो, जसमा सात मुलुकका सात हजार मान्छेसँग कुराकानी गरिएको थियो । त्यसमध्ये पहिला ६ देखि १४ वर्षका बच्चाका अभिभावकसँग र पछि बच्चासँग पनि कुरा गरिएको थियो । यस सर्वेक्षणमा अमेरिका, चीन, जापान, पोल्यान्ड, रुस, चेक रिपब्लिक र युकेका अभिभावक र बालबच्चा सामेल गरिएको थियो ।
यस शोधमा के पाइयो भने छोरीको तुलनामा छोराले लिङ्ग भेदको महसुस कम गरेका छन् साथसाथै उनीहरुले अलग अलग किसिमको रचनात्मक खेललाई खुला मनले अपनाएका छन् । छोरीका लागि जुन कुरा खेल्न दिइन्छ त्यो छोराले खेल्न लजाउँछन् । उनीहरू के सोच्छन् भने यस्तो खेलौना खेलियो भन्ने मान्छे हाँस्छन् ।
केटा र केटीको एउटै खेलौना !
सुहासिनी पाल खेलौना डिजाइनर हुन्, जसले ३ सय बढी खेलौना डिजाइन गरिसकेकी छिन् । उनले लेगोको कदमलाई सकारात्मक र समाजको लागि प्रगतिशील कदम बताएकी छिन् । सुहासिनी पालका ग्राहक भारतमा मात्र होइन, थाइल्यान्ड, इटली, बेलायत, अमेरिका टर्की र फ्रान्सजस्ता देशमा पनि छ । उनले किन्डर जोय, डिजनी, हेप र छाेटा भीम जस्ता ब्रान्डका लागि खेलौना बनाइसकेकी छिन् ।
खेलौना डिजाइनर भएका नाताले उनले आफ्नो खेलौनामा सुनौलो र हरियो रङ प्रयोग गरेका छन्, ताकि यो छोरा अनि छोरी दुवैका लागि सराबरी होस् ।
५ असार २०७८ १४:०१
फनस्कूल खेलौना बनाउने कम्पनी हो । कम्पनीका सिइओ आर जेसवन्त भन्छन् कि भारतको खेलौना बजार नयाँ हो । पुरानो बजार अर्थात् यस्तो देश जहाँ खेलौनाको बजार सदियौँदेखि सञ्चालनमा छ, त्यहाँ छोरा र छोरी दुबै एकअर्काको खेलौना मिलेर खेल्छन् ।
यद्यपि फनस्कूल इन्डिया लिमिटेडका सिइओ आर जेसवन्तले बिबिसीसँग भनेका छन्, ‘म यो भन्न सक्दिनँ कि सबै खेलौना लिङ्गमा आधारित हुन्छ । पक्कै पनि केही खेलौना केटाहरुको लागि र केही केटीहरुको लागि बनाइएको छ । फूनस्कुलले अहिलेसम्म यस्तो तटस्थ खेलौना बनाउनका लागि कुनै यस्तो कदम उठाएको छैन ।’
पञ्जाब युनिभर्सिटीमा विमेन स्टडिज विभावका डा. अमीर सुल्ताना भन्छन्, ‘तपाईँ जब छोरा र छोरीलाई खेलौना दिनुहुन्छ तब छोरीले धेरैजसो गुलाबी रङको खेलौना र छोराले निलो रङको खेलौना रुचाउनेछ ।’
उनी रङको सिद्धान्तलाई लिएर भन्छन्, ‘गुलाबी रङ सुन्दरताको प्रतिक हो । निलो रङ आकास र समुन्द्र जोड्ने रङ हो । निलो रङले असीमितता र बलियो भन्ने सङ्केत गर्छ ।’
उनी थप्छन्, ‘छोरीको खेलौना हेर्नुभयो भने पित्तृसत्तात्मक सोच देखिन्छ । उनको खेलौनाले पालनपोषण गराउने भूमिकामा देखाइन्छ । उनीहरूको खेलौनामा गुडिया, किचेन सेट, मेकअप सेट देखिन्छ । अर्कोतिर छोराको खेलौना साहसिक खेलसँग सम्बन्धित हुन्छ । जस्तो रोबोट, गाडी, गन, जसले पुरुषको आक्रमकता देखाउँछ ।’
खेलौनाको माध्यामबाट छोरीलाई घर सम्हाल्न, बच्चा सम्हाल्न आदि सिकाइने तर छोरालाई यस्तो नसिकाउने उनी बताउँछन् । यस कुरालाई जोड दिँदै साक्षी सिङ्घल भन्छन्, ‘खेलौना बनाउने कम्पनीले छोरा र छोरीका लागि अलग खेलौना बनाउनुको स्वार्थ भनेको मुनाफा आर्जन गर्नु मात्र हो ।’
कतिपय पसल त यस्तो हुन्छ, जहाँ छोरा र छोरीका लागि अलग अलग गरिएको हुन्छ । यदि छोराले गुडिया खेलेमा उनलाई हाँसोको पात्र बनाइन्छ । उनलाई कमजोर भनी औँल्याउने गरिन्छ ।
लेगोले जुन सोध गरे, त्यसमा शोधकर्ताले भनेका छन् कि यो जेन्डर स्टीरियोटाइपले बच्चाको रचनात्मक विकासमा असर गर्छ । भविष्यमा गएर उनीहरु त्यही बाटो रोज्छन्, जसले उनीहरूको बाल मनोविज्ञानमा छाप छाडेको थियो ।
साक्षी सिङ्घल भन्छन्, ‘खेलौना एक बच्चाको विकासमा अहम् हुन्छ । यदि लैङ्गिक हिसाबले तटस्थ खेलौना बनाउने हो भने त्यसले बच्चामा भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक र संज्ञात्मक विकास गर्न सहयोग गर्नेछ । उनका अनुसार खेलौनाको कुनै रङ हुँदैन, न लिङ्ग नै ।
१ मंसिर २०७८ १२:१६
मलाई जन्तभन्दा मलामी जान आनन्द लाग्छ – नगरकाेटी (भिडियो)